Hery Rajaonarimampianina : “Efa tafapetraka ny fototry ny fampandrosoana” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Efa tafapetraka ny fototry ny fampandrosoana”
Azo lazaina fa efa tomombana ankehitriny ny fametrahana ireo fotodrafitrasa hijerena ny fampandrosoana amin’ny ampitso, tahaka izany ny lalana sy ny lafin’ny angovo sy ireo fotodrafitrasa hafa mifandraika amin’izany hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fandaharana fotoam-bita isaka ny Zoma. Noho izany dia tanteraka hoy ny filoham-pirenena ny efa nandrandraina hatrizay, dia ny fanorenana ho an’ny ho avy. Tsiahivina tokoa fa efa hatrany ampanombohan’ ny fe-potoam-piasany ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nanompana ny ezaka ho an’ ny fototry ny fampandrosoana ny firenena, ary izay dia amin’ny alalan’ny fametrahana sy fanamboarana ireo fotodrafitrasa maro, tsy hohadinoina ny fiampitana mankany amin’ ny fampiasana ny angovo azo havaozina. Ny firenena tahaka an’i Madagasikara anefa izay ahitana taham-pahantrana ambony dia ambony ka miandrandra fampandrosoana haingana sy azo tsapain-tanana, io fijery io izay azo lazaina fa somary nampifanolana ny Malagasy sy ny mpitondra “eo amin’ ny lafin’ny fampandrosoana dia misy ireo asa izay azo tanterahina eo noho eo, ary misy ihany koa no ilaina fotoana noho ny antanan-tohatra izay tsy maintsy lalovana” hoy ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny fandaharana fotoam-bita. Nohamafisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina noho izany fa ezaka fampandrosoana izay tanterahin’ny fitondram-panjakana ny fijery lavitra, ary izany dia tafiditra indrindra anatin’ ny vinam-pisandratana 2030.
Mba tsy hampiady saina ny vahoaka malagasy mikasika io vinam-pisandratana hatramin’ny taona 2030 io anefa dia nitondra fanazavana ny filoha Malagasy. Nambarany fa fotoana napetraka hamitana sy hahazoana izay fandrosoana izay ny fe-potoana napetraka, saingy ny asa kosa izay efa mandeha amin’ izao ary misy ny efa vita. Araka ny vina napetraka, noho ny fisandratana 2030 dia hihena hatrany amin’ ny 25% ny tahan’ny fahantrana. Ahafahana mahatratra ny tanjona hoy ny filoha dia sehatra fito no ho laharam-pahamehana dia eo ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, jono, fizahantany, indostria, fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny fambolena. Noho izany hoy ny filoha dia tokony hananan’ny Malagasy iray manontolo ny vina mankany amin’ ny fampandrosoana, izany tanjona izany anefa dia mila faharetana. Efa mipetraka kosa anefa hoy izy ny fototra amin’ izay fampandrosoana izay, ary tanjona manaraka ny fandrosoana. Noho izany dia niantso amin’ny fiaraha- mientana amin’ny hisian’ ny fitoniana politika sy fifampatokisana eo amin’ ny mpitantana, izany hoe ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy, mba ahafahana mahatratra ny tanjona iraisana izay efa napetraka sy nifanekena.